MPIANATRY NY EPP – « Omeo sekoly sy dabilio mendrika izahay » - Ministère de l'Education Nationale
MPIANATRY NY EPP – « Omeo sekoly sy dabilio mendrika izahay »
Mpianatra ao amin’ny kilasy taona fahadimy (7ème ) ao amin’ny sekoly Fanabeazana Fototra (EPP) etsy Anosibe i RABEARISOA Petiniaina. Isan’ireo mpianatra mahay ny tenany, satria, matetika dia izy hatrany ny lohalaharana rehefa mivoaka ny vokam-panadinana.
Tahaka ireo namany dia ora dimy isan’andro no laniny any an-tsekoly. Matetika dia amin’ny 7 ora latsaka fahefany maraina ny fidirana, ka amin’ny 12 ora sy fahefany atoandro ny firavana.
Rehefa hariva kosa ny ora fianarana, dia manomboka amin’ny 12 ora sy sasany ny lakilasy, ary tsy mirava raha tsy amin’ny 5ora sy sasany hariva.
Isan’ireo sekoly avy amin’ny ambaratonga fototra, nahazo efitrano rao vaovao, sy dabilio manara-penitra ny sekoly ianarany.
« Aty an-dakilasy no tena fiainanay ka rariny sy hitsiny raha homena efitrano sy dabilio mendrika anay izahay. Mampalahelo raha amin’ny fitaovana tsy zarizary sy tontolo tsy mampivelatra ny saina no voatery tsy maintsy ianarana. Hankasitrahinay ankizy ny ezaka tahaka itony. Misaotra indridra », hoy izy raha nitondra ny feon’ireo namany, nandritra ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo dabilio, izay nataon’ny ministeran’ny Fanabezam-pirenena ny alarobia lasa teo.